तपाईंको कार्ड अरु बैंकको एटिएममा घुसाउँदा शुल्क कति लाग्छ? :: Setopati
तपाईंको कार्ड अरु बैंकको एटिएममा घुसाउँदा शुल्क कति लाग्छ?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, बैशाख २३
कहिलेकाही आफूसँग भएको एउटा बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा घुसाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। सम्बद्ध बैंकको एटिएम नजिक नभएर होस् वा भएर पनि काम नगरेको अवस्थामा यस्तो वाध्यता पर्दछ।
जुन बैंकको कार्ड छ, सोही बैंकको एटिएमबाट देशभर पैसा निकाल्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन।
तर एउटा बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्ने गरेको छ। सीमित बैंकहरुले ल्याएका केही अफर बाहेक एक बैंकको कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा घुसाएर रकम झिक्दा वा ब्यालेन्स जानकारी लिँदा शुल्क काटिन्छ। कतिपय बैंकहरुको शुल्क एउटै छ भने केहीको फरक छ।
एक बैंकको कार्ड अर्कोको एटिएमबाट झिक्नुअघि बैंकहरु आबद्ध नेटवर्क बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
बैंकहरु भिसा, एससिटी, नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट वा नेसनल पेमेन्ट नेटवर्क (एनपिएन)मा आवद्ध छन्। केही बैंक दुई वा दुईभन्दा बढी नेटवर्कमा पनि छन्।
सनराइज/सिद्धार्थ/प्राइम कमर्सियल/ जनता/ बैंक अफ काठमाण्डु/ माछापुच्छ्रे/ सिटिजन्स
यी बैंकहरुले दिने भिसा कार्ड सम्बद्ध बैंककै एटिएममा प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन। तर भिसामा आबद्ध एकअर्काको वा अन्यको मेसिनबाट पैसा झिक्दा ३० रुपैयाँ प्रति कारोबार शुल्क लाग्ने गर्छ।
सेन्चुरी कमर्सियल/ एनसिसी/इन्भेष्टमेन्ट/मेगा/ग्लोबल आइएमई/कुमारी/नेपाल/राष्ट्रिय वाणिज्य/कृषि विकास/नेपाल बंगलादेश
यी बैंकका भिसा कार्ड होल्डरले भिसा नेटवर्कमा आवद्ध जुनसुकै बैंकका मेसिनबाट पैसा झिक्दा एक पटकमा ३० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २४, २०७६
एनएमबी बैंकले जारी गर्यो 'एनएमबी भिसा कर्पोरेट क्रेडिट कार्ड'
साना उद्यमीलाई सरल कर्जा दिदैं प्रभु बैंक